Haitaon-tserasera… sabatra roa lela | NewsMada
Saika hanafika ny mpianatry ny sekoly teknika eny Mahamasina ny mpianatry ny sekoly teknika eny Alarobia? Tsy inon-tsy inona no hoe antony sy fotony fa vokatry ny tsy fifankahazoan-dresaka amin’ny tambajotran-tserasera sosialy. Vaovao tsy marina na tsaho fotsiny izao, raha ny fanazavan’ny tomponandraikitry ny sekoly roa tonta. Soa ihany, nivalona tanteraka eo ny raharaha? Arahaba soa, arahaba tsara…
Na izany aza, tsy avela hivalona ho azy amin’izao ny lesoka fakana lesona amin’ny fampiasana tambajotran-tserasera… sabatra roa lela. Sady mamono no mamelona, arakaraka ny fampiasana azy. Eo no mahavoa ny sasany, mba tsy hilazana hoe ny ankamaroan’ny olona, amin’izao fotoana izao: tsy maharaka ny fihazakazaky ny haitao ny saina sy ny fomba fiaina? Mandray an-tendrony, mihinana ambolony…
Mby amin’ny hoe ny marina rehetra tsy filaza na tsy famoaka avokoa? Nefa tsy izay voalaza sy mivoaka rehetra koa dia marina. Mila fanadihadiana izay mivoaka sy mitranga rehetra, ary mila mitandrina sy miambina ny tsirairay: tsy ho voafitaka, tsy hamitaka. Ny fanapariahana vaovao diso na tsaho tsy nohamarinina no tena mahavoa noho ny hafanam-po? Eo koa ny tsy te hisahirana hanamarina sy handinika.
Tsy mahagaga raha mora ny mamitaka sy manakorontana amin’izay heverina ho zava-misy na vaovao hoe eo no ho eo, na izay hoe hita sy re izao aza fa tsy fakafakaina sy dinihina izay antony sy izay mety ho akony amin’ny famoahana sy fanapariahana izany. Eo ny hambompo hoe mahalala sy mamoaka zavatra mialoha? Dia maika hamoaka izany amin’ny fanaovana hitsin-dalana… Tsy inona fa tsy fahafehezan-tena.
Ny saina no mila mahay sy mifehy ny haitao na toy inona fihazakazaka sy haavo lentan’izany? Fa tsy ny tena no fehezina sy baikoin’ny haitaon-tserasera eo an-tanan’ny tsirairay, ka lasa… sabatra roa lela: mamitaka ny tena, mamitaka ny hafa koa. Na ahoana na ahoana, tsy mitsahatra ny fihazakazaky ny haitao. Mila maharaka izany koa ny saina sy ny fomba fiaina: mamakafana, tsy feheziny…